Osisi ndị na-eme ka ikuku dị ọcha: ụdị kachasị mma | Green Renewables
osisi ndị na-eme ka ikuku dị ọcha
Portillo nke German | 13/04/2022 12:00 | Homelọ Green
Ikuku dị n'ụlọ anyị na n'ebe ọrụ anyị na-akawanye njọ. Ọ bụ ụzọ anyị si ebi ndụ emeela ka ọnụ ọgụgụ na-abawanye ụba nke ngwaahịa kemịkalụ na-emepụta n'ụlọ anyị na-ahapụ mkpokọta organic na-agbanwe agbanwe nke na-emerụ ahụ ike. Ndị na-emekarị bụ: formaldehyde, trichlorethylene, benzene, xylene, toluene, carbon dioxide na amonia, ụfọdụ n'ime ha nwere mmetụta carcinogenic pụtara ìhè. Iji merie ọnọdụ a, e nwere dị iche iche osisi ndị na-eme ka ikuku dị ọcha.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị nke bụ isi ihe ọkụkụ na-eme ka ikuku dị ọcha na otú ha nwere ike isi baara gị uru.
1 Uru nke osisi na-eme ka ikuku dị ọcha
2 osisi ndị na-eme ka ikuku dị ọcha
2.2 ebe nkwụ
2.3 ire agụ
2.5 Akwa isi
2.6 ficus siri ike
2.7 chinese nkwụ
2.8 Ogwe nke Brazil
2.9 Igbo ivy
3 Osisi achara
Uru nke osisi na-eme ka ikuku dị ọcha
Osisi nwere ọtụtụ uru n'ime ụlọ. Na mgbakwunye na-eme dị ka eke ikuku fresheners na ụfọdụ, ha na- ha na-ebelata mkpọtụ, meziwanye ọnọdụ ma na-eme ka gburugburu ebe obibi dị ọcha. Cheta na n'oge photosynthesis, osisi na-ewere carbon dioxide site na gburugburu ebe obibi wee gbanwee ya na ikuku oxygen, nke dị mkpa maka iku ume mmadụ.
Ụfọdụ n'ime ha bara uru karịa ndị ọzọ ma a bịa n'ịsacha gburugburu ebe obibi na nzacha ihe ndị na-emerụ emerụ. NASA mere nnyocha sayensị na njedebe 1980s, NASA Clean Air Study, iji chọpụta ndị kacha dị irè na nke a. Ndị nyocha ahụ mere ndepụta nke osisi 20 na-eme ka ọ dị ọcha nke bara uru karịsịa maka ihicha ikuku na oghere mechiri emechi.
Bill Wolverton bụ onye ndu akwụkwọ nyocha a bụ onye sayensị America ọkachamara na kemịkalụ, microbiology, biochemistry na injinịa gburugburu. O kpebisiri ike na ise n'ime osisi ndị a kacha mma maka ịdị adị na ịdị irè. Ndepụta nke Wolverton kọwara na mgbasa ozi dị iche iche ka dị irè ma na-adọrọ mmasị, osisi ndị a nwere ike wepụ ihe ndị na-emerụ ahụ na ikuku dị ka formaldehyde, benzene, chili, carbon monoxide ma ọ bụ trichloroethyl.
Ọ bụ otu n'ime osisi na-eme ka ọ dị ọcha yana otu n'ime ihe kachasị mfe ilekọta. Ịtinye osisi a n'ụlọ anyị na-ebelata ogige ndị na-agbanwe agbanwe dị ka formaldehyde, xylene na toluene, nke na-emerụ ahụ ike, ma ọ dịkwa irè n'iwepụ acetone, trichlorethylene na benzene.
Obodo nke oke ohia nke Central na South America, ọ chọrọ ebe nwere ìhè na-apụtaghị ìhè, na ọ bụ ezie na ọ na-amasị iru mmiri, ọ na-adịkarịghị mmiri, na ime ụlọ ịwụ nke nwere ìhè eke bụ ebe dị mma maka osisi a.
Otu n'ime osisi na-eme ka ikuku dị ọcha n'ozuzu ya. A maara ya maka iji ime ụlọ. A na-ahụ nkwụ a n'ụzọ dị mfe na ihe ịchọ mma Victoria na na fim oge. Ihe kpatara ya bụ na ọ na-ebi n'obi ụtọ n'ime ụlọ na-enweghị mkpa maka ìhè anyanwụ kpọmkwem. Na mgbakwunye, enwere obere nlekọta dị mkpa iji dobe ya n'ọnọdụ kacha elu. Osisi nkwụ a bụ obodo Madagascar. Ma taa ọ bụ n'ụwa niile. Las Palmas bụ ọkachamara na mwepụ nke formaldehyde, benzene, na carbon monoxide (karịsịa na-enye aka ma ọ bụrụ na onye nọ n'ụlọ gị na-ese anwụrụ).
A na-eji ya amịkọrọ nitrogen oxides na formaldehyde. Ọ bụ otu n'ime osisi ụlọ na-eguzogide ọgwụ dị adị. Amara dị ka enweghị ike ibibi. Ọ nagidere na-ekpo ọkụ, akọrọ na gburugburu ebe obibi nke ụlọ, ìhè ọkụ, na-eleghara anya atọ, afọ na-enweghị repotting, pests na ọrịa, dị nnọọ ihe ọ bụla.
Ọ kacha mfe idowe. O nwere akwụkwọ ọla edo dị ka obi ma na-ewu ewu na North America. Ọ bụ osisi siri ike nwere ike ịdị ndụ na obere ọkụ na oyi oyi, na-eme ka ọ dị mma maka ụlọ ọrụ na ụlọ ka ọ na-ahapụ carbon monoxide na formaldehyde n'ime ikuku. Ọ na-esi ike nke ukwuu ma na-eto ngwa ngwa. N'ụlọ, ọ na-ahọrọ ìhè na-apụtachaghị ìhè na ala ooh. Zuru okè maka ime ụlọ ịwụ ma ọ bụ kichin.
Na-ewepụ carbon monoxide na nsị ndị ọzọ na adịghị ọcha. Ọ bụ otu n'ime osisi atọ kachasị elu maka iwepụ formaldehyde na ikuku. Ọ dị mfe ilekọta na okpomọkụ kwesịrị ekwesị, ịgbara mmiri na ọkụ, osisi gị ga-adị ndụ ruo ọtụtụ afọ.
Ọ na-anabata obere ọkụ na oyi nke ọma. Ha na-anagide ụkọ mmiri ozuzo, ha agaghị anwụ ma ọ bụrụ na ha chefuo mmiri n'ihi na ha na-echekwa mmiri na mgbọrọgwụ ha.
ficus siri ike
Ọ bụ ụdị ahịhịa ndụ mgbe niile nke genus Ficus sitere na ugwu ọwụwa anyanwụ India (Assam), ndịda Indonesia (Sumatra na Java). E webatara ya na Europe na 1815 dị ka ahịhịa ụlọ. Otu n'ime ndị kacha mfe idowe. Ịtinye osisi a n'ụlọ anyị na-ebelata formaldehyde, ihe na-agbanwe agbanwe nke na-emerụ ahụ ike.
Raphis excelsa bụ nkwụ nwere ite mara mma nke dị mfe ilekọta na ọ chọghị nnukwu ọkụ. Raphis excelsa, nke a makwaara dị ka ahịhịa agịga ọla edo nke China, Ọ nwere ọtụtụ ụdị dị elu nke otu mita na ọkara. Na-ebelata formaldehyde na benzene, ogige organic na-agbanwe agbanwe na-emerụ ahụ ike.
Ogwe nke Brazil
Aha sayensị ya bụ Dracaena na ọ bụ nke ezinụlọ agave. O sitere na ebe okpomọkụ America ma bụrụ osisi shrub na-acha akwụkwọ ndụ. A na-eji eriri agba aja aja dị ọkụ nwere mgbanaka kwụ ọtọ mara ya. Akwụkwọ ndị ahụ kwụgidere n'osisi, nwere ọdịdị lance, ma pụta ìhè maka agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-egbuke egbuke na eriri odo na-agafe na ha.
Okooko osisi ndị a na-etolite naanị na ụdị ndị okenye na-eru ogo ụfọdụ (na-abụkarị mita abụọ) ma pụta ìhè maka ísì ụtọ ha. Ọ na-agbakarị oge ntoju ma na-ebelata ogige organic na-agbanwe agbanwe dị ka trichlorethylene na xylene, nke na-emerụ ahụ ike.
Ọ bụ osisi na-arị elu nke nwere ike ịrịgo ọtụtụ mita n'elu ala ma nwee ike ịrịgo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị elu ọ bụla, dị ka osisi, nkume, mgbidi. Enwere ike ime nchịkọta akwụkwọ na ị ga n'oge ọ bụla n'afọ, ọ bụ ezie na ọ ka mma ime ya tupu okooko. Na-ebelata ogige organic na-agbanwe agbanwe na-emerụ ahụ ike, dị ka formaldehyde, trichlorethylene na benzene. Nke a na osisi vaịn bụ ihe siri ike na-eto eto, prefers oyi na iru mmiri, na ike nọ na-na akụwa na mbara ihu.
Na-arụ ọrụ dị ka humidifier eke. Ọ bụ osisi sitere na China, a na-akọkwa ya n'ụwa niile. Ugbu a enwere ike iji ya dị ka akụkụ nke ịchọ mma nke ụlọ, ubi na patios. N'ihi njirimara pụrụ iche ya, ọ bụ osisi na-achọ obere nlekọta.
Na-ewepụ benzene, formaldehyde na trichlorethylene. Osisi a na-ewu ewu nke ukwuu na-eto eto na ọnọdụ ọkụ dị ala na ọ dịghị achọ mmiri dị ukwuu, na-eme ka ọ dị mma maka ndị na-echefukarị ịkwọ osisi ha mmiri.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere osisi ndị na-eme ka ikuku dị ọcha na uru ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Homelọ Green » osisi ndị na-eme ka ikuku dị ọcha
gịnị bụ nkwado
Ihe na-eduzi na mkpuchi